हैट ! यस्तो पनि सम्भोग ? - Khabar Break | Khabar Break
असार ३१- एउटा होटलको प्राङ्गणमा केही प्रेमिल जस्ता देखिने जोडीहरु मदिराको बेहोसीमा अर्धचेत हुँदै नाचिरहेका छन् । कहिले यता लडछन् कहिले उता लडछन् ।
प्राप्त गर्न सकुन् पनि कसरी रु एकअर्काप्रति विश्वास नै थिएन । उनीहरुले एक अर्काको लागि सम्भोगको लागि मात्र प्रयोग गरिरहेका थिए ।
यस्तो युगचेतनावान ऋषिको जन्म भैसकेको परमसत्ताले जानकारी गराए । उनको उदेश्य नै सत्य धर्मको स्थापना, नशामुक्त समाज, मांसाहार मुक्त समाज, तथा चरित्रवान समाजको निर्माण गर्दै भय, भोक र भ्रष्टाचारमुक्त विश्व निर्माण गर्ने । तथा यस्तै चेतनावान, प्रकृतिसत्तासंग एकाकार गर्न सक्ने समाज निर्माण गर्ने !! यो लेख हाम्रो कुरा डटकमका लागी कृष्ण न्यौपानेले लेखेका हुन् ।